Jiro ahazoana aina hahatonga izao tontolo izao toerana tsara kokoa
Fanavaozana, fanajana, fandresena, fandraisana andraikitra, fankasitrahana. Manaova jiro fitsaboana tsara kokoa
Nanchang Micare Medical Equipment Co., LTD dia orinasa vaovao sy haitao avo lenta, miorina ao amin'ny faritra fampandrosoana ny teknolojia avo lenta any Nanchang izahay. Mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana jiro ara-pahasalamana hatrany izahay. Ny vokatra lehibe indrindra dia manarona ny Ligths amin'ny alàlan'ny fandidiana, ny jiro fandinihana ara-pahasalamana ary ny jiro medikaly, sns. Ny karazana taratra LED taratra LED izay dinihina sy novolavolaintsika dia nahatratra ny haavo efa an'izao tontolo izao, ary efa nahazo patantam-pirenena maro, lasa fanavaozana mpitarika amin'ny indostrian'ny jiro medica. Ny taratasy fanamarinana azo dia manana ISO13485, CE, mari-pahaizana momba ny varotra maimaimpoana sns.
Micare dia natokana hanomezana tontolo iainana miasa azo antoka, salama ary ahazoana aina ho an'ireo mpandray anjara amin'ny sehatry ny fitsaboana rehetra, amin'ny fampiasana ny zava-bita ara-tsiansa sy teknolojia farany, fahalalana matihanina amin'ny sehatry ny fitsaboana, ary fanavaozana mitohy, hamokarana vokatra maitso sy angovo, vokatra azo antoka sy mahomby, ary mamorona sanda lehibe kokoa amin'ny fampandrosoana sosialy.
Ity ekipa ity dia manana ekipa manana mpiasa tena mahay. Mifantoka amin'ny eritreritra momba ny fandidiana ny fahamendrehana, ny matihanina ary ny serivisy izahay. Ho fanampin'izany, ny fomba fihevitray dia ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, izay heverina ho fototry ny fahavelomana. Izahay dia natokana amin'ny fampandrosoana ny orinasanay sy ny loharano maivana. Mikasika ny vokatra, manolotra fanoloran-tena kalitao feno ho an'ny mpanjifanay izahay miaraka amin'ny antoka kalitao hahatratra ny foto-kevitry ny mpanjifa sy ny kalitaony aloha. Mandritra izany fotoana izany dia mankasitraka ireo mpanjifantsika vaovao sy mahazatra izahay izay matoky ny vokatray. Hatsarainay bebe kokoa ireo vokatra sy serivisy efa misy eto aminay, ary hakana ny fironana farany amin'ny fampandrosoana teknolojia amin'izany. Hametraka fandrosoana teknika vaovao ho an'ny fanavaozana izahay mba hanomezana vokatra tsara sy serivisy teknika ho an'ireo mpampiasa anay. Micare dia mamokatra jiro alokaloka amin'ny alàlan'ny fandidiana, jiro fanampiana amin'ny fandidiana, jiro amin'ny loha medikaly, vera fanamafisana ara-pahasalamana, loharanom-pahazavana mangatsiaka ara-pitsaboana ary karazana hafa.
Tamin'ny volana Jona 2011
Tamin'ny volana Jona 2011 dia niorina tamin'ny fomba ofisialy i Micare ary lasa mpamokatra hazavana fandidiana fitsaboana any amin'ny faritanin'i Jiangxi.
Tamin'ny taona 2014, ny fahazavana amin'ny ankapobeny amin'ny LED Surgical Light dia nahazo ny loka faharoa tamin'ny Jiangxi Product Vaovao Vaovao Tsara.
Nanomboka ny 2015 ka hatramin'izao
Nanomboka tamin'ny 2015 ka hatramin'izao, ny orinasa dia manana vokatra fototra toy ny jiro fandidiana ara-pitsaboana, jiro fanadinana ara-pitsaboana, loharanom-pahazavana mangatsiaka ara-pitsaboana, jiro medaly, sns., Ary niara-niasa tamin'ny hopitaly maro hanitarana ny tsena anatiny sy ivelany ary handray anjara amin'ny isan-karazany fampirantiana ara-pitsaboana ao an-trano sy any ivelany imbetsaka ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa.
jiro fanadinana ny rindrina, Jiro nify, Jiro fanadinana ara-pitsaboana, Jiro mandeha amin'ny fandidiana, Jiro halogen ho an'ny mpandinika biokimika, Jiro fanadinana Halogen,